Anna Musharrax baan ahay! (Faallo)
6/25/2012 5:36:00 P
| Comments() Roma--KNN--Anna Musharax baan ahay waa faalo xiiso leh oo ka hadlaysa xaaladda dalka Qof adduun jooga addinkiisu ma laabmo, haddaan iilka la jiifin. Erayo ka mid ah hees uu ku xareediyo Alfannaan Axmed Rabsho (AUN) ayaa ahaa:
Maanta xaalad kale yaan ku jirnaa, oo xay tahay? Maxaa lagu qeexi karaa? Sidee loo qeexi karaa? Saadaaline ha inoo dambaysee, ma ahan inay adag tahay, oo aan qawaarradada jooga iyo quwaaxda iman doona la garanayn, balse, waa inay noqotay maad iyo madadaalo aan malahaba la galin karin, aniguse waxaan ku tilmaami lahaa MARXALADDA MAGACYADA. Inaan ku jirno MARXALADDA MAGACYADA waxaa kuu caddaynaya, caadi ahaan MUSHARRAX waxaa la dhihi karaa, qofku marka uu u gudbiyo magaciisa guddiga doorshada, uuna buuxyo shuruudaha looga baahan yahay qofka xilka u sharraxan, inta ka horraysa wuxuu noqon qof niyadda ka jecel, ama qalbiga ka raba.
Inta sharraxan, inta is sharraxi doonta iyo inta niyadda iska sharraxday ee aan nuu la dhihi karin, waxay ka siman yihiin XANUUNKA XUKUN JACAYLKA, ugama jeedo in qof walba oo hammiyaa inuu xil qabto ama isu taaga madaxnimo inuu sidaa yahay, balse, sida wax u dhacayaan yaa sidaa ka dhigaya, aqriste, adba wax ka duwan ma kuu muuqdaan?. Marka laga soo tago in niyadda laga jeclaan karo, ama loo tartami karo madaxnimo, maxaa diiday in meelo kale nayadda lagu hayo, si loo dhaliyo hurmar iyo hannaan dheellitiran? Maxaa diidaya in siyaasadda laga soo billaamo hoos iyo xakabadda Albaabka? Mise haddaan madaxnimo laga billaabin dhadhanba ma lahan? Inta sharraxan ma ku jiraa mid leh khibrad maamul iyo maarayn? Hadday leeyihiin, maxay qabteen oo la taaban karaa?.
Asc dhamaan shaqaalaha shabakada wararka kulmiye aad ayaa idiin kuugu hambalyeehaa qaabka aa u shaqeysaa anigasa waxaa aad iisoo jiitay faalooyinka kusaabsan muqdisho by Posted by Maxamed cabdi maxamed on 7/15/2012 1:36:34 PM Asc dhammaan bahda kulmiye. Waa faallo qiima leh kana hadleyso waaqica markan jiriyo wareerkan socdoo. Bashir thanks sxb sare. Posted by Deeq-darajo on 6/28/2012 2:22:31 AM asc dhaman bahda kulmiye aad ayaan idinkugu mahad celinayaa aniga waxaaba si gaar ah ii soo jiidatay faalada ana musharax ayan ahay by Posted by faadumo clahi max.ed on 7/29/2012 4:48:34 AM Asc bahda kulmiye runti howsha aad heydan waa mid aad ku amaanantihin wana tan kaliya e ad idcdha kale uga duwan tihin by Posted by aadan ahmed bulaale on 7/31/2012 2:30:17 PM Name: (Required)